Maxay tahay ujeedka ay Itoobiya u magacowday Qunsul cusub Puntland? - Axadle
Dowladda Federaalka Itoobiya ayaa Degnachew Yitbarek u magacowday Qunsulka guud ee ay ku leedahay magaalo hogaamiyayaasha dowlad goboleedka Puntland ee Garoowe.
Egnachew Yitbarek ayaa Axadii booqday xarunta madaxtooyada ee magaalada Garoowe, halkaas oo uu kula kulmay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni.
“Hogaamiyaha Dawladda Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa qasriga Madaxtooyada ee Garoowe ku qaabilay Qunsulka cusub ee Itoobiya u fadhiya Puntland Mudane Degnachew Yitbarek” ayaa lagu yiri war ka soo baxay Madaxtooyada Puntland.
Qunsulka cusub ee qibrada u leh diblomaasiyada iyo xiriirka Soomaaliya ayaa badali doona Mabratu Waldo Aragay oo xilkaas hayay tan iyo sanadkii 2019.
Puntland waxay sheegtay in Itoobiya ay iska kaashaneyso amniga, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, dib u dhiska hay’adaha dowladda iyo ganacsiga.
Diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa duulimaadyo toos ah ku timaadda Puntland, gaar ahaan garoomada diyaaradaha ee Garoowe iyo Boosaaso, waana diyaaradda keliya ee ka shaqeysa magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa.
In kasta oo Dowladda Federaalka Itoobiya in dowladdu xiriir wanaagsan la leedahay ugaaskiisa Madaxxweyne Maxamed, haddana safiirna wuxuu sii joogayaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, laakiin qunsulo ka jirta Hargeysa iyo Garoowe.
Barcelona miyey saxiixyo ku samayn doontaa suuqan?
Biden Presidency: Reduction for Africa, or not up to